Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo sheegay in ay Somaaliya ka tirsan tahay gobollada Itoobiya iyo nin lagu magacaabo Adan Garaase oo sheegay in uusan aqoonsaneyn mas'uuliyiintii uu dhawaan u magacaabay gobolka Hiiraan madaxweyne Yuusuf dibna u qabsaday xarunta gobolka Hiiraan. Ruunkinet 02/01/07
Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya mudane Xuseen Caydiid ayaa maanta ka sheegay shir jar'aaid in uu dhammaaday xuduudihii ay kala lahaayeen Itoobiya iyo Soomaaliya.
Mudane Caydiid ayaa shirkaasi ja'raa'id ku sheegay asagoo jooga magaalada Muqdisho in aysan Soomaliya yeelan doonin ciidamo qaran balse ay yeelanayaan ciidamo ammaanka Soomaalida dhexdeeda ah ilaalin doona.
Xuseen Caydiid, Cabdullahi Yuusuf iyo Geeddi ayaa si weyn ugu howlan sidii ay u qancin lahaayeen dowladda Itoobiya ayadoo midba kan kale uu doonayo in uu kalsooni gaar ah ku yeesha mas'uuliyiinta dowladda Itoobiya.
Hadalka ka soo yeeray Xuseen Caydiid ayaa u muuqda mid ka dhigaya Soomaaliya in ay noqoto kililka 6aad ee dalka Itoobiya asagoo sheegay in Soomaaliya aysan yeelan doonin baasaboor u gaar ah.
Dhanka kale, nin lagu magacaabo Adan garaaso oo horay uu Maxamed Dheere ugu magacaabay guddoomiyaha magaalada Beledweyne ayaa maanta xoog ku qabsaday xarunta gobolka Hiiraan ee magaalada Beledweyne.
Mudane Garaaso ayaa la sheegay in uu ka xummaaday magacaabidda dhawaan Col. Cabdullahi Yuusuf u magacaabay mas'uuliyiin cusub oo inta badan taageersan dowladda Itoobiya.
Taageerayaasha Garaaso iyo Dabageed ayaa horay u horkacayay ciidamda Itoobiya ayagoo la kaashaday qaar ka tirsan oday dhaqameedyaya bariga Hiiraan.